Kuisa Art + Natural Elements, Kurudzira Isingaperi Kufungidzira Kweramangwana | MACONWAY DESIGN - Yakanakisa Kitchen Faucets 2021 | Yakanakisa Bathroom Faucets | WOWOW Faucets
musha / Interior design / Kuisirwa Art + Natural Elements, Kufuridzira Kusingaperi Kufungidzira KweRamangwana | MACONWAY DESIGN
Kuisirwa Art + Natural Elements, Kufuridzira Kusingaperi Kufungidzira KweRamangwana | MACONWAY DESIGN
2021 / 08 / 15 kupatsanuraInterior design 3986 0
Mushambadzi Yemukati Dhizaini Mubatanidzwa
Chivezwa chakakodzera nzvimbo
inokura zvakasikwa, zvine musoro uye nhetembo munharaunda yayo.
Tianheng Bayview Bindu iri munzvimbo inonyanya kukosha yeZhuhai - Tangjia Peninsula. Inotora chidimbu chekupedzisira chevhu chakatarisana negungwa munzvimbo ino: inotsigirwa nemakomo akasvibira uye yakanangana yakanangana nemahombekombe akareba, maonero acho haakundike.
▲ Zvemukati zvemapurani dhizaini
Zvichienderana nehunyanzvi hwenzvimbo iyi, timu yezvivakwa yakagadzira 108 metres dziva risingapfuure pamusoro pechivakwa. Haisi chete yakarebesa pasirese ine WRCA yepasirese rekodhi, asi zvakare chiratidzo chitsva muBay Area mune ramangwana. Iyo ine chirevo chekunaka che "mvura inoputika inotambanuka pamusoro pemvura".
Iyo yemukati chikamu che organic chechivako, asi zvakare kudzamisa uye kuwedzera kwechivakwa padanho diki. Dhizaini yedhizaini yechirongwa ichi ndeyekuteedzera mamiriro egungwa eZhuhai akasarudzika enharaunda, uye kuita sebhiriji pakati penzvimbo dzekunze nekunze. Izvi zvinobvumidza iyo yakasikwa nharaunda, dhizaini, mamiriro uye yemukati dhizaini kuti iwirirane kuumba nhaurirano iyo inonzwika uye inoenderera.
Nekudaro, iyo yemukati inoenderera nemusoro wehupenyu hwehunhu uye mapurani, akafuridzirwa neiyo chiaroscuro yenzvimbo dzese. Izvi zvinobvumira simba rezvivakwa kuyerera zvakasununguka uye zvine mutsindo mukati, uye rinopinda zvakadzama nefomu rayo rakazara uye rine simba, richishandisa simba rayo uye simba remukati muchimiro chakayerera, zvichitungamira mukuumbwa kwekutaurirana kwepamoyo pakati penzvimbo nevanhu .
Dhizaini ndiyo sublimation yehunyanzvi, asi zvakare zvichibva pane zviripo
Rakafuridzirwa nenzvimbo yechisikigo yeprojekti - nyanza - uye zvichibva pahupenyu hwazvino, dhizaini inosanganisa fungidziro yakanaka yeramangwana. Iyo yekumberi dhizaini nzira inopa mutinhimira uye kusimba kwegungwa. Dzimwe nguva inoyevedza uye yakanyarara, pane dzimwe nguva ine mhirizhonga. Kubondana kweyekuisa hunyanzvi uye zvakasikwa zvinhu zvinoshandurwazve uye zvakasanganiswa kuratidza mararamiro azere nemifungo yeramangwana.
Iyo dhizaini inoda kutungamira uye kutsanangura ramangwana hupenyu hwakanaka. Iyo yemukati nzvimbo inoenderera mberi neyakavakirwa tekinoroji pfungwa yechishongo, kuitira kuti igadzire yakazara inowirirana uye inowirirana theme nhaurirano yeprojekti. Mugadziri Mr. Ma Conway, seAmerican green building building (LEED AP), agara achitsigira pfungwa yechivakwa chegirini. Pasi pebrashi rake, simba risingaonekwe remukati rehupenyu hwepanyama mweya wepadenga.
Kupinda mukati, mutinhimira wegungwa wakavhurwa kubva panguva yaunopinda munzvimbo yekugamuchira yedhesiki repamberi. Pfungwa yekuyerera kweruzha uye simba zvinodzikisira pasi munda wesimba uye matauriro enzvimbo, nekudaro achiwedzera simba risingaonekwe remukati rehupenyu hwepanyama.
Chimiro chekuveza chinotanga kubva pasi uyezve chinotenderera nekukura kusvika padenga. Iyo inoshandura mutinhimira wemukati, nepo amai-ve-parera zvinhu zvakasarudzwa kumadziro kumashure, pamwe nekududzira kuchena uye rusununguko rwegungwa, ichienderera nekutyora miganhu yenzvimbo dzenyama.
Kunze kugungwa: dhizaini ndiyo sublimation yehunyanzvi, asi zvakare zvichibva pane zviripo
Dhizaini iyi yakaita senge zvinyorwa zvechikepe. Iyo purojekiti yakakamurwa kuita nzvimbo dzinoverengeka dzinoshanda, kusanganisira kugamuchirwa (rwendo rwakaita seyacht iri kufamba pakati pegungwa), nzvimbo yejecha inoratidzira (panoungana simba rehupenyu regungwa mumafungu), nzvimbo yepakati yekutaurirana . -mvura yekudonha kwemvura kunze kwehwindo inowedzera zvakadaro).
Iyo purojekiti yakatarisana negungwa, uye chinangwa chechokwadi chekutanga chechirongwa ndechekupa rusununguko uye kudanana kusingadzorwi. Zvinotora pfungwa ye "yacht" kurega rusununguko uye kusadzora kuoneka mune yakashongedzwa uye yepamusoro-magariro mamiriro. Simba rehupenyu rakakosheswa neakazvarwa mavambo, pasi peye dhizaini dhizaini, kurongeka uye nguva kubvisa muganho. Iyo yakazara nzvimbo inopa yakavhurika, yemitambo uye ine simba kumira.
Nzvimbo yebhokisi rejecha nderechimanje-manje mukukwezva, nesiringi ichitambanudzira pasi muchimiro chemisodzi. Iyi ndiyo nzvimbo yekutarisisa panogarisana nekukura kwenzvimbo uye kunoita kuti hunyanzvi hutariswe zvakanyanya.
Iyo dhizaini inoenderana nenzvimbo yekuvaka uye inosangana nemasikirwo uye nyanza. Nekuderedzwa kwemasaisai, gungwa rinoyerera richipinda mukati. Pakati pezvidimbu zvekufungidzira uye zvekufungidzira, pane runyararo runonakidza, kuratidza hunhu hwepanyama pasina kurasikirwa neavant-garde fashoni.
Chiedza neKwayedza: Mweya weNzvimbo
Dhizaini Ma Kangwei aida kuti chirongwa ichi chiburitse imwe pfungwa yehunyanzvi hweramangwana. Izwi rekuti "ramangwana" rinowanzo kupa vanhu nzvimbo isina muganho yekufungidzira.
Iyo nzvimbo yese yakaita semahara inoyerera asi mvura ine simba, ichitenderera nekuumburusa chimiro chakanakisa. Icho chiratidzo chakanakisa cheichi idenga risingapfuure. Inoratidzira mitinhimira yakasiyana inogadzirwa nekusangana pakati pegungwa nechiedza, senge kupopoma mafungu, mafungu ane hasha, kana chinyararire kunakirwa nekuvira kwezuva. Munzvimbo yekutaurirana, kufamba uku kuri pakati nepakati uye kunodziya.
Pamusoro pekufungidzira kwerudo rwegungwa, girini, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye tekinoroji zvakare ndiwo musimboti wekufunga. Iyo yakavhurika uye ine simba dhizaini yenzvimbo chirongwa inogadzira yakajeka uye inoenderera inoona chiitiko.
Tekinoroji inosanganisirwa muchadenga nenzira ine hungwaru - zvisingaverengeke zvemagetsi zvikwere zvinoumba siringi. Iyo yedhijitari dhizaini inogadzira iyo rwiyo rwekudzikamisa mafungu. Pakati pemasaisai, wega wega unovhenekera muviri wakashongedzwa nekristaro zvidimbu, zvichipa mwenje kuwanda kugadzirwa uye hunyanzvi.
Pano dhizaini ndeyekufungidzira kwenzvimbo pane hunyanzvi. Iyo siringi inoenderana, inoenderera nehunyanzvi, kuvaka uye kunyangwe sculptural. Haisi yekumisikidzwa kwehunyanzvi chete, asi zvakare mota yekuburitsa nekusunungura zvisingaverengeke zvakapfuma uye zvakavanzika manzwiro uye zvishuwo-zvinokosheswa zvirimo mumoyo, nezve hunyanzvi uye nezve hupenyu.
"Isu tinoshandisa nzira yepakati pekuvaka kuvaka marambi ekuisa siringi, kugadzira rwiyo rwegungwa, uye nekubatanidza nemagetsi anoshanduka-kuchinja mwenje, kana rudo rwekuvira kwezuva kwegoridhe. Kunyangwe iri denga kana nyanza, tinotarisira kuburitsa manzwiro akasiyana mukuvakwa kwemukati. ” Akagadzira akadaro.
Iyo nzvimbo izere nechiedza, ruvara, mhando uye kuravira. Sezvo zuva rinobuda nekuvira, mwenje wakanyarara unodzikira zvinyoro nyoro. Nguva iri kufamba, dzimwe nguva yakasimba, dzimwe nguva yakajeka. Iyo ine rudo rusingaperi uye izere nemweya unokodzera moyo wemunhu. Parizvino, iyo curve, siringi, 108 metres emvura keteni, kuyerera kwechisikigo, mune imwechete kuenda.
Gadzira mafungu: ane mavara, akadzika, anomutsa
Kana masitepisi anotenderera ari iwo rudo rwefungu, iyo erevheta horo yakaita kunge zvinyoro nyoro zvegungwa mushure megungu guru.
Makakombama akapfava uye echisikigo anomhanya mukati mese, achigadzira nzvimbo yekugara ine nhetembo nyoro yemvura. Tiffany bhuruu inoratidzirwa pakati kuti igadzire kudanana kwegungwa. Hunhu hwepanyama hwenzvimbo inoitwa pano, ichioneka yakanyarara uye ichiyerera.
Kunonaka kwetii: dzokera kune yekutanga sosi
Liang Qiushi akamboti, "Kwese kune vanhu veChinese, kune tii". Imwe tii, imwe nyika, idetembo rehupenyu hwevanhu vechiChinese, saka chaiyo tii kamuri yakagadzwa mune ino kesi. Hafu yakashongedzwa, hafu mafirework, uye jekiseni remazuva ano aesthetics, ndiyo yekupedzisira.
Iyo nzvimbo yese yakagadzirirwa kuve yakapusa uye yakatwasuka, iine hunhu hwetii. Mitsara inopinza, yakachena color scheme, inodziya huni, yakachena chena, zvese izvi kusangana pamwechete, bvisa pfungwa uye kunze kweguruva tafura.
Iyi nzvimbo izere nesimba nyoro, rakatsetseka uye rakapamhama. Inounza kuyerera uye pachena kuendesa kunzvimbo, uye inotungamira kuona kwemunhu nemaitiro. Dynamics uye makakatanwa zvinowedzerwa pano.
Kuiswa kwehunyanzvi kumadziro ekumashure kunoitwa nematanda emakomo akaiswa pamusoro peumwe neumwe. Yakazembera kumakomo akasvibira uye yakatarisana negungwa, inotonyanya kugadzikana uye kutandara.
MuTianheng Bayview Bindu, mushure mekusangana nerwendo rweyacht kuenda kugungwa, kuva nekapu yeti uye kunakidzwa nekuvharirwa kunonyaradza moyo.
Pekupedzisira, Ma Kangwei akati, “Tinorekodha nyaya dzinoitika munguva dzakasiyana nenzvimbo munguva yerwendo rweiyi rwendo rwegungwa kuburikidza nekugadzira. Zvinhu zvese zvakagadzirwa zvirimo zviri kutaura nyaya imwe chete zvinofadza. ”
Zita rePurojekiti: Zhuhai Tianheng Bayview Garden Sales Center
Project Kero: Kwete 63, Peninsula Six Road, Xiangzhou District, Zhuhai, Guangdong Province
Nzvimbo yeprojekti: 1100 mativi tsoka
Yemukati Yekugadzira Dhizaini: KDI New York Conway Dhizaini Hofisi
Dhizaini Yekuvaka: DLN ARCHITECTS LIMITED (HONG KONG)
Purojekiti Photographer: Dou Nguva Architectural Space Photography
KDI Conway Dhizaini New York - Muvambi
Pakapfuura :: Yakashongedzwa Uye Yakashongedzerwa Chirevo, Kuumba Muguta Rekugara Space | SRDP DESIGN Zvadaro: Imba Yechikoro Dunhu Inopaza Kupfuura neiyo "Yakare Uye Yakashongedzwa" Uye Inotangazve Hupenyu Hwehupenyu ｜ Shuangbao Dhizaini
2021 / 08 / 15 4496
2021 / 08 / 14 3645
2021 / 08 / 13 4319